Ogaden News Agency (ONA) – Carwada Kitchiner, Canada oo Hidaha Iyo Dhaqanka Ogadeniya lagu Soo Bandhigay
Carwada Kitchiner, Canada oo Hidaha Iyo Dhaqanka Ogadeniya lagu Soo Bandhigay
Posted by ONA Admin	/ June 26, 2012
Sawiraan iyo warbixinta Carwada OYSU kuso bandhigtay Kitchner hoos ka daawo.
Waxaa maanta lagu qabtay Magaalada Kitchener Multicultural Festival oo lagu xusayay dhaqamada caalamka waxaa goobtaas sii heersare ah uga qayb qaatay Ururka Midowga dhalinyarada iyo ardayda Ogadenia(OYSU) Canada ee Jaaliyada Ogadeniya ee Kitchner. waxaana laga kala yimid magaaloyinka Hamilton iyo Windsor. Dhalinta OYSU waxey goobtaas ku soo bandhiigeen hiddaha iyo dhaqanka Ogadenia.
Jaaliyada Kitchner iyo dhalintooda OYSU waxey shaaca ka qadeen dhibaatada lagu hayo Ogadenia gaar ahaan Xasuuq qarsoon ee ka jira Ogadeniya halkaas oo ay warqado ku qeybinayeen gaadhaya 1700 oo xaashiyood kuwaas oo ay ku qornayeen maclumaad ka xog waramaya Taariikhda dhulka Ogadneiya iyo gumeysiga dhibatada uu kuhayo. Waxaa kale oo halkaas dhalinta iyo jaaliyada Kitchner ay ku arruursaden saxeexyo laga qaaday dadweynihi kasoo qeyb galay carwadan. Waxaana Saxeexa Petitionku uu yahay mid Shacabka ree Canada ay u gudbinayaan dowlada Canada iyaga oo ka codsanaya in laga jaro deeqda lasiiyo kaligi taliye Zenawi, oo deeqda u isticmala sidii uu ugu cabudhin lahaa shacabka Ethiopia xasuqna ugu geysta Ogadeniya.
Waxa kale oo goobtaas ka howl galayay oo war-bixin dheer ka soo jeedisay Hogaanka Arimaha Dibada OYSU halganto Rahma Ahmed iyo Halganto Halimo Gobaad OYSU/UK.
OYSU waxey goobtaas ku qaybisay warqado dhan 1700 oo kuxusantahay taariikhda Ogadeni iyo dhibaatada lagu hayo shacabka aan waxba galabsanin. Ururka OYSU oo member ka ah Multicultural Centerka Ontario ayaa kulama gaar ah la yeeshay xisbiyada wadanka Canada ka jira.
Shacabka ka soo qayb galay Multicultural festivalka ayaa aad ugu farxay in dadka dhibaatada inta la’eg lagu hayo oo wali moralka/kalsoonida ka muuqato,waxey ku bararujiyeen in aan laga daalin in goobkasta lagu soo bandhigo barnaamijyada noocan oo kale ah.Wariyaal ay la kulmeen Ururka OYSU ayaa u balanqaday in sii fiican u soo shac bixindoonan Qadiyada Somalida Ogadenia. Xuskii aay sii heersare ah ku soo gabagabobay.
Jaaliyadaha Ogadeniya ee Wadanka Canada ayaa ku howlan abaabulo xoog badan, waxayna sanadkan Bishan July ee fooda inagusoo heysa lagu qaban doona wadanka Canada Sirweynihii Jaaliyadaha Aduunka. oo halkaas wadamo badan oo qaradaha aduunka ah la isaga iman doono.
OYSU ayaa ah ururka dhalinta ay jaaliyadaha Ogadeniya ku faanaan oo howlo waxtar leh iyo xooga jaaliyadaha Ogadeniya ay ku duulaan noqday.